Hamro Kantipur | अफगानिस्तानमा तालिबान अर्थव्यवस्था र अफिम अफगानिस्तानमा तालिबान अर्थव्यवस्था र अफिम
अफगानिस्तानमा तालिबान अर्थव्यवस्था र अफिम
काबुल, अफगानिस्तानमा आफ्नो अघिल्लो शासनकालमा तालिबानले अफिमको खेतीमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसको कारण अवैध लागुऔषधको व्यापार अन्त्य भएको तालिबानको दाबी छ ।
यद्यपि २००१ मा अफगानिस्तानमा अफीम उत्पादनमा कमी आएको थियो, तर पछिल्ला वर्षहरुमा तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा अफीम खेती बढेको देखिएको छ ।
अफगानिस्तानमा कति अफीम छ?
अफीम हेरोइन जस्ता अत्यधिक लत लागूपदार्थ उत्पादन गर्न परिष्कृत छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको औषधि तथा अपराध कार्यालय (UNODC) का अनुसार अफगानिस्तान अफिमको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक देश हो ।
विश्वको अफिमको कुल उत्पादनमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अफगानिस्तानको हो । सन् २०१८ मा UNODC को अनुमान अनुसार अफगानिस्तानको कुल अर्थतन्त्रको ११ प्रतिशत हिस्सा अफिम उत्पादनको थियो ।
अफिमका विषयमा तालिबानले के भने?
अफगानिस्तानको नियन्त्रण हासिल गरिसकेपछि तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले भने, “जब हामी सरकारमा थियौं औषधि उत्पादन भएको छैन। हामी एकपटक फेरि अफीम खेती शून्यमा ल्याउनेछौं। कुनै तस्करी हुनेछैन।”
अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार तालिबानको नेतृत्वमा अफिम खेती बढेको छ । यो सन् १९९८ मा ४१ हजार हेक्टर बाट २००० मा ६४ हजार हेक्टर हुन पुग्यो ।
अफगानिस्तानको हेलमण्ड प्रान्तले विश्वको कुल अफिम उत्पादनको ३% प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ र अधिकांश प्रान्त तालिबानको नियन्त्रणमा रहेको छ । तर जुलाई २००० मा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा अफिम खेतीमा प्रतिबन्ध लगायो ।
मे २००१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्ट अनुसार, ‘तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा अफिम उत्पादनमा प्रतिबन्ध पूर्ण सफलता भएको छ ।’ २००१ र २००२ मा तालिबानको प्रतिबन्धको बेला अफिम र हेरोइनको अन्तर्राष्ट्रिय गिरफ्तारी पनि दुर्लभ थियो ।
अघिल्लो सरकारले नियन्त्रण गरेको खेती पछि पनि, यो स्पष्ट छ कि अधिकांश अफिम तालिबान नियन्त्रित क्षेत्रहरुमा उत्पादन भैरहेको थियो । उदाहरण को लागी, हेलमन्द दक्षिणी अफगानिस्तानको एक प्रान्त हो । यसको धेरैजसो जमिन २०२० मा अफिमको खेती लगाइएको थियो, जब यो तालिबानको नियन्त्रणमा थियो ।
अफिमबाट तालिबान आय?
अफिमको खेती अफगानिस्तानमा रोजगारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो । अफगानिस्तानको UNODC को अफीम सर्वेक्षण अनुसार करिब एक लाख २० हजार मानिसहरु यसमा निर्भर थिए ।
अमेरिकी विदेश विभागका अनुसार तालिबानले अफीमलाई कर लगाएर आम्दानी पाउँछन्, साथसाथै अवैध कब्जा र अफिमको तस्करीबाट अप्रत्यक्ष आम्दानी पाउँछन् भने अफिम खेती गर्ने किसानहरुलाई १०% कर लाग्दछ ।
अफीमबाट हेरोइन बनाउने प्रसंस्करण प्रयोगशालाबाट पनि कर संकलन गरिन्छ र यसका व्यापारीहरुले पनि कर तिर्छन् । तालिबानले अवैध लागुऔषधको व्यापारबाट वार्षिक १०० देखि ४०० मिलियन डलर कमाउने बताइएको छ ।
अफगान पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी प्रहरीको विशेष महानिरीक्षकका अनुसार तालिबानको वार्षिक आम्दानीको ६० प्रतिशत आम्दानी अवैध लागूपदार्थको कारोबारबाट आउँछ । एजेन्सी